Midsomer လူသတ်မှု: စကားလုံးများ, မှုခင်း & လျှို့ဝှက်ချက်များ Cheats&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
အားဖြင့် Editor | စက်တင်ဘာလ 30, 2021
မင်းရဲ့မှန်ဘီလူးကိုဖမ်းပြီးဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် crossword puzzle game မှာအပြင်းအထန်သတ်နေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကူညီဖြေရှင်းပေးပါ!
Midsomer ကောင်တီ: cottages များချစ်စရာနေရာတစ်ခု, စိုက်ခင်း, သစ်တောများနှင့်စမ်းချောင်းများသည်တိတ်ဆိတ်မှုကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည်, သာယာအေးချမ်းသောဘဝ. ဒါတောင်အရူးမလုပ်ပါနဲ့… Midsomer သည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအန္တရာယ်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်, နေရာတိုင်းမှာလူသတ်မှုတစ်ခုနဲ့. ခိုင်မာသောစုံထောက်အင်အားလိုအပ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ! Elizabeth Barnaby သည် Midsomer Constabulary တွင်နောက်ဆုံးထည့်သွင်းထားသောအရာဖြစ်ပြီးသူသည်အမှုများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်လူသတ်သမားများကိုဖမ်းရန်သူမ၏ဘဝရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။. မင်းရဲ့စုံထောက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
Midsomer County ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလေထုထဲသို့ ၀ င်ပါ, Midsomer Murders ဒရာမာစီးရီးကိုအခြေခံသည်. ဝှက်ထားသောသဲလွန်စများကိုရှာဖွေရန် minigames များနှင့် crossword ပဟေိများကိုဖြေရှင်းပါ, ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သံသယရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးရာဇ ၀ တ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုရှာဖွေပါ: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, ဘယ်လိုလဲ, ဘာကြောင့်လဲ!
သဲလွန်စများကိုရှာဖွေရန် Midsomer County ကိုသင်ဖြတ်သွားစဉ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်တက်ကြွသောမြင်ကွင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပါ. Paddy ၏အကူအညီဖြင့်အရေးကြီးသောအထောက်အထားများကိုထုတ်ယူပါ, Elizabeth ၏ခြေလေးချောင်းအမွေးရှိသောသူငယ်ချင်း, အတင်းအဖျင်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဒေသခံများကိုစကားပြောပါ!
cross crossword ပဟေိများကိုဖြေရှင်းပါ
Midsomer လူသတ်မှု: စကားလုံးများ & ရာဇဝတ်မှုသည်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ဆုကြေးများအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သောအက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများရနိုင်သည်.
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://www.facebook.com/Midsomer-Murders-Words-Crime-101074402141026
← အကပြိုင်ပွဲ – လှိုင်သာယာ&Hack Idle Creepy Park Inc မှ. – လှိုင်သာယာ&Hack →